Manni fayyaa Sioux land namni tokko sababa coronavirus irra kan ka’e har’a du’uu gabasan | KWIT
Hospitaala Sioux city lama dhukubasatoota coronavirus akka itti tajaajilan baay’e akka rakkise himani.
Manni fayyaa unity point health umataa qaraa hakima jarra jiraan sababa covid-19 jechaa dhukubsatoota isanni kara hospitaala biratti dabarsu jirani.
akkasumaas, mercy one yeroo amma kana dhukubsatoota tajaajila kennuf turban 8 akka karoorfate hime. Hospiaalichi yerodhaf humna akka hin qabnee fi akka bakka biraa dabarsaa jiraachuf himan. Akkasumas hospitaalichi qarqaarsa meshaa alaa fi hojatota argachuu jira.
Oggeeyan fayyaa ykn doctorii lama qofaa nama coronavirus qabame 95 qarqaaru jiran.
Bulchiitun Iowa Governor Kim Reynolds guyaa har’a Washington dabarsite fi president Donald Trump wal arguu waay’ee state keessatti kampanin akka banamu mar’atan. Dalagaan kun turban tokko hanga bulti 10 keessatti jalqabamu arguu feeti.
Tyson kan Dakota city keessatti argamu erga bakka hunda qulqulleesani fi hojatoota isaale erga qorate booda guyyaa Kamsaa ganama akka banuu hime.
Gabaan qonan bultoota Sioux City guyyaa Harba akka baname himan.
Akka tilmaamanitti namni 300 ol ta’uttu dhufee, daddafiin waa bituun lixaan.
Gabaan qonan bultoota akka jedheti nagenyummaa umata eegudhafi wali irra fageenya fi wantoota harka ittin qulquleefatan gabaa maraa keessa kaahudhan egumsa gochu jiran. Dabalataani akka mask fuula akka godhatan gadi qabani gorsu.